radiokaski.com – The young Vibes radiokaski.com – The young Vibes
1 बर्ष अगाडी
मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान यही असार १७ गतेदेखि सञ्चालन हुने निर्णय भएसँगै आन्तरिक उडानका एयरलाइन्स जनस्वास्थ्यको मापदण्डको परिपालना गर्दै उडानको तयारीमा जुटेका छन्। आन्तरिक उडानका अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स,…
भदौ २४ सम्म के गर्न पाइन्छ के पाइदैन
आज गण्डकी प्रदेशमा
2 बर्ष अगाडी
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार १६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार देशभरका प्रयोगशालामा ९ हजार ८१० जनाको पिसिआर र एन्टीजेट परीक्षण गर्दा २ हजार १६ जनामा कोराना पुष्टि भएको हो। यस्तै आज ३० जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ९ सय ७५ पुगेको छ। ४ हजार ९ सय १४ संक्रमणमुक्त…
काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ५०० भन्दा बढी भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा र २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्लामा बन्दाबन्दी…
उपत्यकाका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गरी पीसीआर परीक्षण निषेधाज्ञाभित्रै…
काठमाडौं। कोरोना महामारीपछि चलचित्र क्षेत्रमा धेरैको रोजिरोटी गुम्यो। लकडाउनका कारण काम नपाएपछि खान समेत समस्यामा परेकालाई नायक पल शाहले पाँच…
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र डा. युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयासमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध सुरु भएको छ । नेकपाभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र सचिवालयको शक्ति सन्तुलनले खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढेको छ । संकटका वेला आफूलाई साथ दिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो दाबेदारी पेस गरेपछि ओलीले विभिन्न विकल्पमा समेत छलफल थालेका छन् । पूर्ववत निर्णयअनुसार आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य भई…
काठमाडौँ। ग्लोबल आइएमइ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त भएका छन् । आज बसेको बैंकको संचालक समितिको बैठकले उनलाई ४ बर्षका लागि सीइओ नियुक्त गरेको हो । यसअघि पनि ग्लोबल आइएमइ बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनी भेट्रान बैंकरका रुपमा चिनिन्छन् !
कामना सेवा विकास बैंक र सिद्धार्थ बैंक बीच विप्रेषण सम्बन्धी कारोबारको लागि एक अर्काको प्रतिनिधी…
काठमाडौं । अंकित मूल्यभन्दा बढी (प्रिमियम) मा साधारण शेयर निष्कासन ९आईपीओ० गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा…
काठमाडौं । यो वर्ष नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । गत…
२ सय १३ मुलुक र यसका अधीनस्थ क्षेत्रलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले गाँजेको छ। सबैजसो मुलुक नै कोरोनाबाट मुक्ति पाउन संघर्षरत छन्। आधा विश्व घरभित्रै सीमित छ भने बाँकी ठाउँमा पनि अवस्था सामान्य छैन। विश्वमा आइतबार साँझसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड ३४ लाख १० हजार ९ सय ८८ पुगेको छ। ८ लाख ९ हजार १ सय ४२ जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाको…
महाराजगञ्जमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको छ । आकस्मिक कक्षमा कार्यरत ६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको…
ब्राजिलबाट ल्याएको कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको चीनको दाबी
एजेन्सी, २९ साउन । कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ । ब्राजिलबाट चीनमा आयात गरिएको कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको…
कस्तो मास्क लगाउने ? कसरी लगाउने ?
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढेसँगै बजारमा मास्क (मुखावरण) को अभाव भएको छ । मास्क नपाइने समस्या एकातिर छ भने…
प्रियंका कार्की यतिबेला आफ्नो गर्भावस्थाको मज्जा लिइरहेको छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुहरु अभिभावक बनेको खबर दिएदेखि नै प्रियंकाको चर्चा चुलिएको हो । केही महिना अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनी गर्भवती छन् कि भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो। उनका शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूले उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखिएको र पोस्ट गरिएका फोटोमा मोटाएको देखिएको जस्ता कुरालाई आधार बनाएर प्रियंका गर्भवती भएको हो कि! भन्ने अड्कल काटेका थिए। अब…
लियोनमाथि शानदार जित निकाल्दै बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । गएराति भएको खेलमा फ्रान्सेली क्लब लियोनलाई ३-० गोलले हराउँदै जर्मन क्लब बार्यन फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । बार्यनको जितमा सर्ज गेनाब्रीले २ तथा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले १ गोल गर्न सफल भए । बायर्नले…
४ भदौँ, काठमाडौँ । सन्दिप लामिछाने आवद्ध टिम जमैका तलैवाजले २०२० को क्यारेबियन प्रिमियर लिग…
काठमाडौं (एजेन्सी) । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाईनल सकिमरण पूरा भएको छ । गए…
भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनीले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन् । उनले इष्ट्राग्राममा एक…
काठमाडौं । इन्टर मिलान युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । गए राति भएको खेलमा…
चीनले कोरोना बिरुद्ध उत्पादन गरेको भ्याक्सिन आगामी डिसेम्बरबाट बजारमा आउने भएको छ । ग्लोबल टाईम्सका अनुसार डिसेम्बर अन्त्य सम्ममा बजारमा आम मानिसका लागि आउने यो भ्याक्सिनको बजार मुल्य समेत तय भएको छ ।जस अनुसार करीब एक हजार चीनीया युआन तय भएको छ । जस अनुसार दुई डोज भ्याक्सिन नेपालीले खरीद गर्दा १७ हजार भन्दा बढी पर्ने देखिएको छ ।बजारमा आईसके पछि यसको मुल्य अझ कम…
पश्चिमी कोलम्बियामा भएको एक सशस्त्र आक्रमणमा परी कम्तीमा नौ जनाको ज्यान गएको छ । नारिनो प्रान्तका प्रान्तीय गभर्नरले सो कुराको…
अमेरिकाको सिन्सिनाटीमा गएराति भड्किएको हिंसाका क्रममा गोली चल्दा चार जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार गोली लागेर कम्तीमा १८…
मायो क्लिनिकका अनुसन्धाताहरुले कोभिड–१९ बाट निको भएका व्यक्तिको रक्त प्लाज्मा अरु व्यक्तिलाई निकै फलदायी रहेको जानकारी दिएका छन्, तर प्रामाणिक…
- तत्काल त्रिविका परीक्षा नहुनेः परीक्षाको जिम्मा डीन कार्यालयलाई
- लकडाउनमा खुलेको विद्यालयका शिक्षकमा कोरोना
- विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन यस्तो हुँदैछ तयारी